12 Archives - Tameelay
“ဖါးကန့်၊ ဝှေခါရွာသို့ ကြွရောက်သော သီတဂူဆရာတော်ကြီး ခရီးစဉ်သတင်း”
July 12, 2020 by daddy
“ဖါးကန့်၊ ဝှေခါရွာသို့ ကြွရောက်သော သီတဂူဆရာတော်ကြီး ခရီးစဉ်သတင်း” ကျေးဇူးတော်ရှင် သီတဂူဆရာတော်ကြီးသည် ၁၂-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီအချိန်တွင် ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့ သို့ရောက်ရှိပါသည်။ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ သီတဂူစက္ခုဒါနဆေးရုံတွင် သီတဂူအထောက်အကူပြုအဖွဲ့က ဆပ်ကပ်သော နေ့ဆွမ်းဘုဉ်းပေးပြီးနောက် ၁၁:၃၀ နာရီ အချိန် ဖါးကန့်သို့ တပ်မတော်ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် ပင့်ဆောင်ကြရာ ၁၂:၀၀ နာရီအချိန် ချမ်းသာချောမောစွာဖြင့် ရောက်ရှိပါသည်။ ဖါးကန့်မြို့ရှိ သီတဂူစက္ခုဒါနဆေးရုံတော်တွင် ခေတ္တနေ့သန့်စင်ပြီးနောက် ၁:၃၀ နာရီအချိန်တွင် မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် မိုင်-၃၀ ခန့်ဝေးကွာသော ဝှေခါရွာသို့ ကြွရောက်ပါသည်။ ဝှေခါမှော် မြေစာပုံပြိုကျသည့် အခင်းဖြစ်ပွါးရာနေရာသို့ ကြွရောက်ပြီး ကွယ်လွန်သွားကြသူများအတွက် မေတ္တာပို့သပေးပြီးနောက် ၁၃ ရက်နေ့၊ နေ့လည်ခင်း၊ အခင်းဖြစ်ပွါးရာနေရာအနီးတွင် ကွယ်လွန်သူများအား ရည်စူး၍ ဖါးကန့်မြို့နယ်အတွင်းမှ သံဃာတော်-၂၀၀ ပါးအတွက် … Read more
Categories Buddha Words and Knowledge Tags 12
ကျေးဇူးတော်ရှင်သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး ဝှေခါမှော်သစ်ကုန်း ကျောက်စိမ်း လုပ်ကွက်ကျင်းကြီးထိပ်သို့လာရောက်၍မေတ္တာ ကမ္မဋ္ဌာန်းများစီးဖြန်း
ကျေးဇူးတော်ရှင်သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး သည် ယနေ့ ၁၃၈၂ ခု ၊ ပထမဝါဆို လဆုတ် ( ၈) ရက်၊ ဖားကန့်မြို့နယ် ၊ ဝှေခါမှော်သစ်ကုန်းကျေးရွာ၊ ကုမ္ပကျောက်စိမ်း လုပ်ကွက်ကျင်းကြီးထိပ်သို့ ပထမရက်အနေဖြင့် ခေတ္တလာရောက်၍ မေတ္တာ ကမ္မဋ္ဌာန်းများစီးဖြန်းရန် ရောက်ရှိလာခဲ့။ ” သီတဂူစန်းလပမာ ချမ်းမြသာယာရှိကြပါစေ” https://www.facebook.com/sasanalinkarakhaung/videos/311854583194896/ ဂျမ်ဂါ / ဓါတ်ပုံ သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး Ashin Theravamsa ( MA – Thesis ). Date Sun 12 Jun 2020. ေက်းဇူးေတာ္ရွင္သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး သည္ ယေန႔ ၁၃၈၂ ခု ၊ ပထမဝါဆို လဆုတ္ ( ၈) ရက္၊ ဖားကန႔္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေဝွခါေမွာ္သစ္ကုန္းေက်း႐ြာ၊ … Read more
မြေစာပုံပြိုကျပြီး ကွယ်လွန်သွားကြသူများအတွက် ရည်စူးကာ မေတ္တာပို့ခြင်း၊ ရည်စူးလှူဒါန်းပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးရန် သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး ဖားကန့်မြို့သို့ရောက်ရှိ
ကျေးဇူးတော်ရှင် သီတဂူဆရာတော်ကြီး ၁၂-၇-၂၀၂၀ (တနင်္ဂနွေနေ့) နံနက် ၇:၃၀ နာရီအချိန်တွင် ဖါးကန့်သို့ ကြွရောက်ပါသည်။ မြေစာပုံပြိုကျပြီး ကွယ်လွန်သွားကြသူများအတွက် ရည်စူးကာ မေတ္တာပို့ခြင်း၊ ရည်စူးလှူဒါန်းပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ သီတဂူသတင်း ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး ၁၂-၇-၂၀၂၀ (တနဂၤေႏြေန႔) နံနက္ ၇:၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ဖါးကန္႔သို႔ ႂကြေရာက္ပါသည္။ ေျမစာပုံၿပိဳက်ၿပီး ကြယ္လြန္သြားၾကသူမ်ားအတြက္ ရည္စူးကာ ေမတၱာပို႔ျခင္း၊ ရည္စူးလႉဒါန္းေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ သီတဂူသတင္း
ပံုျပင္ဆိုတာ ကေလးေတြအတြက္ အေဖာ္ျပုစရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးဘဝမွာ ပံုျပင္မ်ိဳးစံုနားေထာင္ဖူး၊ ကာတြန္းကားမ်ိဳးစံုၾကည့္ဖူးၾကပါတယ္။ ပံုျပင္ေလးေတြ၊ ကာတြန္းကားေလးေတြက ကေလးေတြကို အပ်င္းေျပေအာင္၊ စိတ္ေကာင္းရွိေအာင္သင္ေပးတတ္ေပမယ့္ တခ်ိဳ႕အခ်က္ေတြက ကေလးေတြအတြက္ အျမင္မွား၊ အေတြးမွားေတြျဖစ္ေစတာေၾကာင့္ မသိနားမလည္တဲ့ကေလးေတြအတြက္ အဆိပ္အေတာက္ေတြျဖစ္ေစပါတယ္။ ပံုျပင္နဲ႕ကာတြန္းကားအခ်ိဳ႕ရဲ႕ ကေလးေတြအတြက္အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစတဲ့အခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။ (၁) အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရဖို႕က ဘဝမွာအေရးၾကီးဆံုးအခ်က္ျဖစ္တယ္ တခ်ို႕ပံုျပင္နဲ႕ကာတြန္းကားေတြရဲ႕အဆံုးသတ္မွာ မင္းသားေလးနဲ႕လက္ထပ္ျပီးေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ေနသြားၾကသတဲ့ ဆိုတာမ်ိဳး၊ မင္းသားေလးရဲ႕အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရဖို႕အတြက္ အစြမ္းကုန္ၾကိုးစားၾကတာမ်ိုးကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါကို ကေလးေတြနားေထာင္မိ၊ ၾကည့္မိတဲ့အခါ အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရဖို႕က ဘဝမွာအေရးၾကီးဆံုးအခ်က္ျဖစ္တယ္၊ ဒီလုိေရြးခ်ယ္ခံရဖို႕ပဲ ဦးတည္ျပီးၾကိုးစားသင့္တယ္လို႕ ျမင္သြားနိုင္ပါတယ္။ (၂) ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူနဲ႕လက္ထပ္ရဖို႕အရာရာေပးဆပ္သင့္တယ္ ဒီအခ်က္ကလည္း ကေလးေတြကို လမ္းမွားေရာက္ေအာင္တြန္းပို႕နိုင္ပါတယ္။ အခ်စ္တစ္ခုအတြက္အရာရာေပးဆပ္တာ၊ အရြယ္မေရာက္ခင္ အိမ္ကေနထြက္ေျပးျပီးခ်စ္သူေနာက္လိုက္တာဟာ ေကာင္းတဲ့လုပ္ရပ္၊မွန္ကန္တဲ့လုပ္ရပ္လို႕ ထင္သြားနိုင္ပါတယ္။ (၃) ကိုယ့္ကိုကယ္တင္မယ့္လူတစ္ေယာက္အျမဲရွိတယ္ တကယ့္ေလာကၾကီးမွာ ကိုယ္ဒုကၡေရာက္တဲ့အခါ၊ အခက္အခဲေတြြၾကံုလာတဲ့အခါ ကိုယ့္ကိုကူညီဖုိ႕တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနတာက အဓိပၸါယ္မရွိတဲ့လုပ္ရပ္ပါ။ … Read more
Categories General Knowledge Tags 12, pp
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(၁၂-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ ၁။ (၁၂-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညနေပိုင်းတွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) မှ ပထမအသုတ်စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သော ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၉၄) ခုနှင့် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သော ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၀၃) ခု၊ စုစုပေါင်း (၁၉၇)ခုတွင် – COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာသစ် မတွေ့ရှိပါ။ ၂။ (၁၂-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီအထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲ အတည်ပြုလူနာ (၁၈၀) ဦးရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ ၃။ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာဟောင်းများ၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများအား စစ်ဆေးမှုတွင် (၂) ကြိမ် ဆက်တိုက် ပိုးမတွေ့ရှိသူ (၂) ဦး (Case – … Read more
Categories Uncategorized Tags 12